The Curtain Hofisi Yekutengesa - Dhizaini magazini
Hofisi Yekutengesa Dhizaini yeprojekiti iyi ine yakasarudzika nzira yekushandisa Metal Mesh seiyi mhinduro ye inoshanda uye aesthetics chinangwa. Iyo translucent Metal Mesh inogadzira chidzitiro chejira rinogona kupaza muganho pakati pemukati nechokunze nzvimbo- iyo grey nzvimbo. Iko kudzika kwenzvimbo kunogadzirwa neiyo translucent chidzitiro inogadzira hupfumi huwandu hwehupamhi hwepamoyo. Iyo yakasvibiswa isimbi yesimbi Metal Mesh inosiyana pasi pemamiriro ekunze akasiyana uye nenguva dzakasiyana dzezuva. Iko kuratidzwa uye translucency yeMesh ine chimiro chakajeka inogadzira yakadzikama Chinese chimiro ZEN nzvimbo.
Zita rechirongwa : The Curtain, Vagadziri zita : Qun Wen, Izita remutengi : aoe.
Dhizaina bvunzurudzo yezuva
Kubvunzana nevanogadzira mukurumbira pasi rese.
Verenga iyo yazvino kubvunzurudza uye hurukuro pamusoro dhizaini, kugona uye kugona pakati pegadziri mutori venhau uye akakurumbira nyika magadzirirwo, maartistant uye vanogadzira. Ona mapurojekiti emazvino ekugadzira uye mibairo-yekuhwina mihanzi nevagadziri vakakurumbira, maartist, maateki nevagadziri. Tsvaga hutsva hutsva hwekusika, hunyanzvi, hunyanzvi, dhizaini, uye zvivakwa. Dzidza nezvekugadzira maitiro evakuru vanogadzira.
Hofisi Yekutengesa Qun Wen The Curtain